Logitech Inotangisa Circle 2 Yekuchengetedza Kamera Iyo Ichave YeK HomeKit Inoenderana | IPhone nhau
Tiri kutarisana nechigadzirwa chitsva kubva kune inozivikanwa Logitech brand uye mune iyi kesi kuongorora kweyavo yekuchengetedza kamera kamera, Circle, iyo Denderedzwa 2. Mariri isu tinowana mashoma mashoma ekuvandudza uye shanduko zvine chekuita neyekutanga vhezheni yeiyo kamera, asi pasina mubvunzo imwe yenyaya dzinonakidza dzevashandisi vemhando iyi yekamera ndeyekuti iyo Circle 2 nyowani ichaenderana neHomekit (kuwedzera kune mamwe Smart Mapuratifomu epamba) saka isu tinokwanisa kudzora kamera yedu zvakananga kubva kune yedu iPhone kana iPad. Kuisa kamera mukati kana kunze kwemusha nekutenda kwayo kwekudzivirira mvura uye kuona zvinoitika pane yedu iPhone kunogoneka neCircle 2, iyo inowanikwa mumhando mbiri, imwe isina waya uye imwe netambo.
Denderedzwa 2 iko kushanduka kweLogitech yekutanga Logi Circle kamera uye inoratidzira yakareruka uye yakawanda mamiriro ekunze asingagadzirwe dhizaini, akawanda mativi ane assorting ekumisikidza sarudzo uye zvishongedzo. Zviripachena ine chishandiso cheIOS uye Android nhare mbozhapamwe chete neyakowo webhu kugara wakabatana nekamera nguva dzese uye kuona zviri pamberi pako nguva dzese. Iyo zvakare ine akati wandei mativi uye zvishongedzo izvo zvinobvumidza mushandisi kusarudza nzvimbo, kuiswa uye kuzvitonga kuri nani.
1 Zvinowirirana zvikamu uye zvishongedzo
2 Mutengo uye kuwanikwa
Zvinowirirana zvikamu uye zvishongedzo
Denderedzwa 2 Window Gomo: Ichi chidimbu chinokutendera kuti uone zviri kuitika kunze kweimba, asi usingafambe uchibva mukati. Mushandisi anogona kungoisa Window Mount kukamera uye kuiisa pane chero girazi rewindo kuti uone zvinoitika kunze.
Denderedzwa 2 Plug Gomo: Plug Mount inokutendera kuti utarise imba kubva kune chero ekunze madziro (kungave mukicheni, mugaraji kana kunyangwe pasi kuti uone chipfuwo chemumba).
Denderedzwa 2 Yekushomeka Kwemamiriro ekunze: Kuwedzera kwemamiriro ekunze kunotendera Circle 2 kuti isvike mberi, mukati nekunze kwemba. Iyo yekuvhara isina mvura inovimbisa kuti tambo dzakachengeteka kubva kunze kwekunze mamiriro.
Denderedzwa 2 Rechargeable Bhatiri: Iyo yakanaka inokwenenzvera iyo Circle 2 isina waya kamera ndiyo-yemwedzi mitatu-kutsiva bhatiri iyo inokutendera iwe kuti uwedzere kushandiswa kwekhamera apo yekutanga bhatiri iri kuchaja.
Denderedzwa 2 inotsigira HomeKit nekukurumidza nesoftware kugadzirisa zvinoenderana nemugadziri wacho pachawo. Iyo inobvumidza kutenderera kusingagumi mu1080pHD, chiratidzo cheusiku, 180º yakafara angle lens, uye maviri-nzira kutaura uye kuteerera. Imwe yeaya maCircle 2 kamera anouya nemaawa makumi maviri nemana ekuchengetedza gore pamwe nechengetedzo uye encryption. Senge dai izvi zvaive zvisina kukwana uye mushandisi achida zvimwe zvekuchengetedza, pane maviri Circle Safe zvirongwa zviripo: CircleSafe ™ Basic inopa mazuva gumi nemana ekuchengetedza uye Circle Safe Premium inopa mazuva makumi matatu nemasere ekuchengetedza uye mamwe maficha, sekushandurwa kwenzvimbo dzekufamba uye vanhu detector.
Denderedzwa 2 yave kuwanikwa yekutenga-pamberi pa Logitech webhusaiti nekutakura kunofungidzirwa kwemwedzi waJuly. Mutengo wekhamera Denderedzwa 2 netambo ndeye € 209 uye izvo zve Denderedzwa 2 isina waya kamera kubva ku € 239. Mutengo wezvishongedzo zvakasiyana unosiyana pakati pe € 29 ne € 59 zvichienderana nechigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Logitech inosvitsa Circle 2 yekuchengetedza kamera inoenderana neKeKKit
iOS 11 uye macOS Sierra inofamba ichienda kuzvinhu zviviri-chokwadi